पुरानो नोटको मूल्य 10 लाख पार्नुहोस सम्पर्क नम्बर सहीत हेर्नुहोस् ! • raradiodarpan.com
पुरानो नोटको मूल्य 10 लाख पार्नुहोस सम्पर्क नम्बर सहीत हेर्नुहोस् !
यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ ।केहि बर्ष देखि, विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ ।
तपाई संग पनि नेपाली पुरानो नोट छ भने यसरि बिक्रि गर्न सक्नु हुन्छ । eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस ।आफु संग बएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस् ।नोटको विविरण, सिरियल नम्बर, कुन जमाना छापिएको सबै उल्लेख गर्नुहोस
इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay OLX र quikr.यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । यस्तो पुरानो पैसाको मुल्य अहिले लाख भन्दा पनि बढी छ कसरि बेच्ने ? हेर्नुहोस यो भिडियोमा ,भिडियो सहित हेर्नको लागी ￼￼यो लिन्क खोल्नुहोस
केहि बर्ष देखि विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ ।तपाई संग पनि नेपाली पुरानो नोट छ भने यसरि बिक्रि गर्न सक्नु हुन्छ । eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस । .(कहाँ कसरी बेच्ने? बेच्ने तरिका सिक्नको लाई ?पुरानो नोट तुरुन्तै बेच्नको लागि ￼️￼यो ￼लिन्क खोल्नुहोस)
बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर– २ बस्ने प्रेमा परियारकी छोरी गंगाको छाला जाने घाउले वर्षौदेखि दुःख
बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर– २ बस्ने प्रेमा परियारकी छोरी गंगाको छाला जाने घाउले वर्षौदेखि दुःख दिइरहेको छ । गंगा जन्मेको तीन महिनादेखि शरिरका विभिन्न भागबाट छाला जाने समस्या सुरु भएको थियो ।
अहिले उनी १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि शरिरका विभिन्न भागबाट छाला जाने समस्याको भने समाधान हुन सकेको छैन । गंगाका शरिरमा अहिले अनुहार हेर्न पनि नसकिने गरि मुख र निधारको छेउ टाउकोमा वर्षौदेखि ठूला घाउ रहेका छन् । उनको उपचारको लागि स्थानीयस्तर र पालिकाबाट समेत केही आर्थिक सहयोग भएपनि निको भने हुन नसकेको आमा प्रेमाले बताइन् ।
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ।इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay OLX र quikr.यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ ।यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले लाख भन्दा पनि बढी छ कसरि बेच्ने ? हेर्नुहोस यो भिडियोमा ,भिडियो सहित हेर्नको लागी यो लिन्क खोल्नुहोस